Kedu ihe onye ndụmọdụ gbasara ịre ahịa Email na Achọrọ M Otu?
Wednesday, April 28, 2010 Satọde, 27 Juun 2015 Scott Hardigree
Dị ka anyị niile maara, ahịa email na-arụ ọrụ ka m wee ghara ịbịara gị ozi a. Kama, ka anyị hụ ihe onye na-ahụ maka ịzụ ahịa email bụ ihe ha nwere ike imere gị.
Ndị na-ahụ maka ịre ahịa email n'ozuzu ha na-ewere ụdị atọ, otu Ụlọ ọrụ na -ere ahịa Email, onye nweere onwe ya, ma ọ bụ onye ọrụ ụlọ na Email Service Provider (ESP) ma ọ bụ Agencylọ Ọrụ Omenala; ha niile nwere nkà na ahụmịhe ndị akọwapụtara iji zụlite usoro azụmaahịa email dị irè. Agbanyeghị, isi ikike ha na onyinye ọrụ ha dịgasị iche iche.
Yabụ ịchọrọ onye ndụmọdụ ahịa email? Ọ bụrụ otú ahụ, olee ụdị? Jụọ onwe gị ajụjụ ndị a.
Ihe nzipu ozi m ziri ezi maka m?
Ihe ngwọta m ma ọ bụ ụlọ m na-enye atụmatụ niile m chọrọ? Ana m eji atụmatụ ndị m na-akwụ maka ya? Ọ dị mfe maka m iji? Ihe m na-akwụ bụ ego m?
Kedu ihe m na-eziga?
Enwerela m ihe m ga-ezipụ? Dị ka ozi email, Akwụkwọ Akụkọ, Iwu ahapụ, Nkwalite, na ozi ịntanetị reactivation? Kedu ihe m na-efu? Ebee ka nkwukọrịta ozi ikuku nọ na-agbari?
Kedu mgbe m kwesiri izipu ozi?
Ekwesịrị m iji ozi dabere na omume onye nnata m iji zipu ozi ịntanetị, dị ka nbudata akwụkwọ ọcha ma ọ bụ ịhapụ ụgbọ? Kedụ banyere ozi ịntanetị ụbọchị, dị ka naanị ndị ezumike ma ọ bụ ụbọchị ncheta. Kedu ihe bụ kalenda ederede m maka akwụkwọ akụkọ m? Ana m agbaso ozi-e nkwado ad-hoc?
Kedu iwu nke azụmahịa m?
Ekpebiela m ihe na-akpata izipu ozi? Kedu data dị mkpa iji kwado ozi ahụ? Usoro mbubata data ọ kwesịrị ịbụ akwụkwọ ntuziaka ma ọ bụ akpaka? Kedu ọdịnaya a na-eziga mgbe ọnọdụ ndị ahụ zutere? Gịnị bụ atụmatụ m maka Site aha na Isiokwu ahịrị? Ekwesịrị m ịgwakọta ya? Kedu na mgbe m kwesịrị ịnwale?
Gịnị bụ ihe mgbaru ọsọ m?
Enwere m ihe mgbaru ọsọ, dị ka ọnụ ọgụgụ nke nbudata, ahịa, ndebanye aha? Kedu ihe m ga-eme iji bulie ndepụta m? Kedu ihe m ga - eme iji belata nsị?
Kedu ihe bụ mkpesa m na-akọ?
Achọrọ m ịhụ karịa ịpị aka na imeghe iji meziwanye nsonaazụ m ma gosipụta ikpe m? Achọrọ m mgbata m na data dị ka CRM na weebụsaịtị nchịkọta Ngwaọrụ iji guzobe ma soro usoro mmachi m?
Marketingre ahịa email bụ ihe bara uru maka ọtụtụ ndị na-ere ahịa, mana usoro ahụ nwere ike ịbụ ihe ịma aka na iwe oge. Onye ndụmọdụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-ere ahịa email nwere ike inyere gị aka iru ihe mgbaru ọsọ gị ma kwe ka ị jiri oge gị rụọ ọrụ ndị ọzọ nke azụmahịa gị.
More chọrọ ihe karịrị naanị nghọta? Otu ụlọ ọrụ na-ahụ maka email nwekwara ike ịnye ọrụ ndị na-akwado ya, yana ntụzịaka, nke achọrọ ịmalite ma kwado mmemme azụmaahịa email siri ike; gụọ kedu ka-esi ewe ụlọ ọrụ na-ere ahịa email ịmụtakwu ihe.
Tags: email ọkachamaraemail MarketingOnye na-ere ahịa Email Email
Gọọmentị Webmaster Central na-enweta Nnukwu nkwalite